IATA: Ny COVID-19 dia mametraka ny antsasaky ny vola miditra amin'ny mpandeha an'habakabaka 2020
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Ny COVID-19 dia mametraka ny antsasaky ny vola miditra amin'ny mpandeha an'habakabaka 2020
Aprily 14, 2020
The Covid-19 ny krizy dia hahita ny fidiram-bolan'ny mpandeha an'habakabaka hidina amin'ny $ 314 miliara amin'ny taona 2020, fihenan'ny 55% raha oharina amin'ny 2019, hoy ny International Air Transport Association (Iată) fanadihadiana farany, navoaka androany.
Tamin'ny 24 martsa, IATA dia nanombatombana vola mitentina 252 miliara dolara (-44% vs. 2019) tamin'ny tranga iray nisy fameperana mafy momba ny dia maharitra telo volana.
Ireo tarehimarika nohavaozina dia hita taratra ny halalin'ny krizy nanomboka teo, ary hita taratra ireto masontsivana manaraka ireto:
Fameperana mafy ao an-trano maharitra telo volana
Fepetra sasantsasany amin'ny fivezivezena iraisampirenena mihoatra ny telo volana voalohany
Fiantraikany mahery vaika manerantany, ao anatin'izany i Afrika sy Amerika Latina (izay kely ny fisian'io aretina io ary antenaina fa tsy hisy fiantraikany firy amin'ny famakafakana ny volana martsa).
Ny fangatahan'ny mpandeha iray taona (anatiny sy iraisam-pirenena) dia andrasana hidina 48% raha oharina amin'ny taona 2019. Ireo singa roa lehibe mitarika an'io dia:
Fampandrosoana ara-toekarena ankapobeny: Miankina amin'ny fitotonganana izao tontolo izao. Ny fahatairana ara-toekarena amin'ny krizy COVID-19 dia antenaina ho mafy indrindra amin'ny Q2 raha toa ny GDP hihena 6% (raha ampitahaina, ny GDP dia nihena 2% tamin'ny haavon'ny krizy ara-bola manerantany). Ny fangatahan'ny mpandeha dia manaraka akaiky ny fivoaran'ny GDP. Ny fiantraikan'ny fihenan'ny asa ara-toekarena ao amin'ny Q2 fotsiny dia mety hianjera amin'ny 8% ny fangatahan'ny mpandeha amin'ny telovolana fahatelo.
Famerana ny fivezivezena: Ny fameperana ny dia dia hampitombo ny fiantraikan'ny fitotonganana amin'ny fangatahana dia. Ny fiatraikany henjana indrindra dia antenaina fa amin'ny Q2. Hatramin'ny voalohan'ny volana aprily, ny isan'ireo sidina manerantany dia nidina 80% raha oharina tamin'ny 2019 tamin'ny ampahany betsaka noho ny fameperana mafy nataon'ny fitondrana hiadiana amin'ny fihanaky ny virus. Ny tsena eto an-toerana dia mbola afaka nahita ny fiandohan'ny fiakaran'ny fangatahana nanomboka tamin'ny telovolana fahatelo tamin'ny dingana voalohany nanalana ny fameperana ny dia. Ny tsena iraisam-pirenena kosa dia hiadana kokoa hanomboka satria toa mety mbola hitazona izany fameperana lavitra izany ny governemanta.
“Mihombo ny fomba fijerin'ity orinasa ity amin'ny antoandro. Ny haben'ny krizy dia mahatonga ny fanarenana endrika V maranitra tsy azo inoana. Raha ny tena izy dia fanarenana miendrika U miaraka amin'ny fitsangatsanganana an-trano hiverina haingana kokoa noho ny tsena iraisam-pirenena. Hitanay fa nanjavona ny antsasaky ny fidiram-bolan'ny mpandeha. Mety ho $ 314 miliara izany. Governemanta maromaro no niatrika ny fepetra fanampiana ara-bola vaovao na nitarina, saingy mbola zava-dehibe ny raharaha. Ny Airlines dia afaka mandoro vola mitentina 61 miliara dolara amin'ny telovolana faharoa fotsiny. Izany dia mametraka asa 25 tapitrisa atahorana hiankina amin'ny fiaramanidina. Ary raha tsy misy fanamaivanana maika dia maro ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro no tsy ho velona hitarika ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena, ”hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA.
Ny governemanta dia tsy maintsy mampiditra fiaramanidina amin'ny fonosana fanamafisana. Ny Airlines dia ivon'ny gadra soatoavina izay manohana asa 65.5 tapitrisa manerantany. Ny tsirairay amin'ireo asa an'habakabaka 2.7 tapitrisa dia manohana asa 24 fanampiny amin'ny toekarena.
“Ny fepetra fanampiana ara-bola ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ankehitriny dia tokony ho fepetra politika manakiana ny governemanta. Ny zotram-piaramanidina mpanohana dia hitazona ireo laharam-pamokarana tena ilaina hiatrika ny krizy. Ny asa sidina an'habakabaka rehetra voatahiry dia hitazona olona 24 hiasa bebe kokoa. Ary hanome ny zotram-pandraharahana ady mety hananana orinasa matanjaka izay vonona hitarika ny fanarenana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo toekarena rehefa voafintina ny areti-mandringana. Raha tsy vonona ny seranam-piaramanidina dia hohalavaina tsy misy antony ny fanaintainan'ny COVID-19, "hoy i de Juniac.
IATA dia manolotra safidy safidy fanampiana maromaro handinihan'ny governemanta, ao anatin'izany:
Fanohanana ara-bola mivantana ho an'ireo mpitatitra sy mpandeha entana mba hanonerana ny fidiram-bola mihena sy ny vola azo avy amin'ny fameperana ny dia napetraka vokatry ny COVID-19;
Loans, antoka ara-bola ary fanohanana ny tsenan'ny fifamatorana orinasa ataon'ny governemanta na ny banky foibe. Ny tsenan'ny fifamatorana orinasa dia loharanom-bola lehibe ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, fa ny fahazoana mamatotra orinasa ho an'ny fanohanana ny banky foibe dia mila itarina ary omen'ny governemanta hanome alàlana ho an'ny orinasa misimisy kokoa.
Fanamaivanana hetra: Fihenam-bidy amin'ny hetra karama aloa hatramin'ny taona 2020 sy / na ny fanitarana ny fe-potoana fandoavana ny sisa amin'ny taona 2020, miaraka amin'ny fanafoanana ny hetra tapakila sy ny haba hafa napetraky ny governemanta.